Fahatsiarovana An’i Gerhard Steinacher, Ilay Novonoin’ny Nazia
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Éwé
Gabriele Votava, ben’ny tanànan’i Meidling, any Vienne, mikabary.
VIENNE—Olona 400 teo ho eo no nanatrika ny fahatsiarovana an’i Gerhard Steinacher, tamin’ny 13 Mey 2015. Vavolombelon’i Jehovah izy ary tsy nety niditra tamin’ny tafika alemà ka novonoin’ny Nazia, 75 taona lasa izay. I Gabriele Votava, ben’ny tanànan’i Meidling any Vienne, no nikabary. Naseho vahoaka ilay takelaka fahatsiarovana natao teo ivelan’ny tranon-dry Steinacher taloha, any Meidling, any Lägenfeldgasse 68.
Izao no lohatenin’ilay fandaharana: “Tsy vitako ny hitifitra.” Izay mantsy no nolazain’Atoa Steinacher tamin’izy nangataka mba tsy hovonoina. Hita amin’ireo teny vitsy ireo hoe inona no tena ninoan’Atoa Steinacher. Zava-dehibe taminy, ohatra, ilay tenin’i Jesosy ao amin’ny Matio 19:19 hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.”
Nianatra Baiboly i Gerhard tamin’ny mbola tanora. Nanapa-kevitra ny ho lasa Vavolombelon’i Jehovah izy, tamin’izy 17 taona. Nosamborina izy tamin’ny 15 Septambra 1939, satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany sady tsy nety nianiana hoe tsy hivadika amin’i Hitler. Nogadraina iray volana sy tapany tany Vienne izy, ary avy eo nafindra tao amin’ny fonja Moabit any Berlin, any Alemaina.
Nalaina am-bavany voalohany Atoa Steinacher tamin’ny 11 Novambra 1939. Nampangaina ho manohintohina ny ezaka atao amin’ny ady izy ka voaheloka ho faty. Nangataka izy mba hamindrana fo noho ny zavatra inoany. Nanamafy ny fanapahan-keviny anefa ny Reichskriegsgericht (Fitsaran’ny Miaramila Reich), tamin’ny 2 Martsa 1940, ka nomelohina ho faty ihany izy. Notapahina àry ny lohan’Atoa Steinacher tamin’ny 30 Martsa 1940, tao amin’ny fonjan’i Plötzensee, any Berlin. Vao 19 taona izy tamin’izay.
Mbola notohizina tany amin’ny kianja Volkshochschule ilay fandaharana. Naseho tamin’ny alalan’ny fampirantiana ny tantaran-dry Steinacher mianakavy. Anisan’ny zavatra naseho tao ny baoritra kely iray, hita tamin’ny 1976. Nisy taratasy 28 tao. Nalefan’i Ignatz sy Luise Steinacher ho an’i Gerhard zanany, tamin’izy nigadra, ireo taratasy ireo. Nisy cartes postales 25 sy taratasy maromaro nalefan’i Gerhard koa tao, mba hampaherezana ny ray aman-dreniny sy hanamafisana amin’izy ireo hoe mbola manam-pinoana toa azy ireo izy.
Rehefa maty i Luise, renin’i Gerhard, tamin’ny 1976, dia hita tao an-tranon’izy ireo ity baoritra feno taratasy sy cartes postales ity.
Mitantara an’ilay fankalazana ny lahatsoratra iray ao amin’ny Wiener Bezirkszeitung, gazety mpiseho isan-kerinandro any Vienne. Voalaza tao fa “fahatsiarovana miavaka” ilay izy, ka “lasa fantatry ny besinimaro” ny herim-pon’Atoa Steinacher. Midera an’Atoa Steinacher toy izao ilay lahatsoratra: “Vonona ho faty izy ho an’ny zavatra ninoany, izay tena niainany tokoa.”
Nanoratra an’ity taratasy ity ho an’ny ray aman-dreniny (etsy ambany ny dikany) i Gerhard Steinacher, ora vitsivitsy talohan’ny namonoana azy. Nofafan’ny Nazia ny andalana telo.
Ho an’i Dada sy Neny,
Tsy misy dikany intsony na hanoratra lava be aza aho. Adiny roa izay, tamin’ny 7.00 hariva, no nitenenana tamiko hoe hovonoina aho rahampitso amin’ny 5.50 maraina. Tonga izao ilay fotoana. Tompo ô, omeo hery aho. Marina ilay hoe ny fanahy mazoto fa ny nofo no malemy. Mipetraka ato amin’ny efitro aho, amin’ny 1.00 maraina izao, misy lehilahy roa iray efitra amiko, mihazakazaka be ny fotoana. Izay sendra tonga ato an-tsaiko fotsiny no soratako ato amin’ity taratasy ity. Mangatsiaka any ivelany any, milatsaka indray ny lanezy. Hanome hery anareo anie ny Tompo! Te hiasa aho ary efa niteny an’izany aho sady nanoratra hoe hiasa mafy aho sady hanao an’izay rehetra azoko atao. Kanefa tsy vitako ny hitifitra, nefa miankina amin’izay daholo ny zava-drehetra. Hatao anie ny sitrapon’ny Tompo, tsy azo sakanana izay tsy maintsy hitranga. Mahereza, aza avela hampahalemy anareo izao fa vao mainka mifankatiava, aza kivy. Mbola kely aho ary tsy hahajoro aho raha tsy omen’ny Tompo hery, izany no angatahiko aminy. Voaraiko ilay taratasinareo tamin’ny 25 Martsa. Tamin’iny ny mampamanginareo farany. Amin’ny 3.30 maraina eo ho eo izao. Tsy noeritreretiko mihitsy hoe handeha haingana be hoatr’izao ny zava-drehetra. [Andalana telo nofafan’ny Nazia] ... tampoka ka tsy hay mihitsy izay hitranga ao anatin’ny iray minitra. Ianareo no maka ny zavatro atỳ. Stylo, antontan-taratasy sy taratasy, vola sy akanjo, lakile, ary zavatra hafa. Mampamangy any amin’ny dadabeko sy bebeko, i Resi, Dadatoa, Totoa, Dadabe sy Bebe, ry Hock mivady. Ny mpiara-miasa amiko rehetra sy izay mahafantatra ahy rehetra ary ny havantsika rehetra. Dada a, mahereza, aza kivy, aza malahelo loatra, fa mahereza amin’ny finoana sy amin’ny zavatra hafa rehetra. Neny koa, mahereza sy matanjaha dia mifanohàna tsara. Mangataka amin’ny Tompo aho mba hiaro anareo sy hanome anareo hery sy fanantenana ary hitarika ny zava-drehetra mba handehananareo amin’ny lalana tsara, dia tsy hisy na inona na inona hanjo anareo. Mivavaka ho anareo koa aho. Mihamanatona ihany ilay fotoana, hitako hoe tena malemy isika. Mbola afaka miova hevitra aho hatramin’izao. Te hiasa aho fa tena tsy vitako ny hitifitra. Hofaranako amin’izay ity taratasy ity. Manao veloma sy manoroka anareo aho, ry Dada sy Neny, mbola ho Gerhard zanakareo foana aho, ary avo 100 000 heny mahery aza, te hiaraka aminareo aho. Any amin’ilay Fanjakana indray isika mihaona, ary ho tafaraka indray isika efatra. Mahereza.